Mwedzi yeGerman nemwaka (Monate)
Vadikanwi shamwari, tichaona mazuva, mwedzi nemwaka weGermany muchidzidzo chedu chinonzi Mwedzi yeGermany neMwaka dzeGermany. Mushure mekudzidza zviperengo uye mataurirwo emwedzi, mwaka nemazuva muGerman, tinokuratidza karenda uye Mwedzi nemazuva eGermany Tichaongorora kuti inonyorwa sei pakarenda.
Nekupa zvakawanda zvekuona muchinyorwa chedu, tichava nechokwadi chekuti chidzidzo chinonyatsonzwisiswa uye chisingakanganwike. Sezvo iwo musoro wemazuva, mwedzi nemwaka muchiGerman iri chidzidzo chinonyanya kushandiswa muhupenyu hwezuva nezuva, inyaya inofanirwa kunyatsodzidziswa.
Sezvo iwe uchiziva, kune gumi nemaviri mwedzi pagore. Mwedzi yako muChirungu inotaurwa na Mwedzi yako muchiGerman Madudzirwo uye chiperengo zvakafanana. Muchokwadi, kuverenga nekupereterwa kwemimwe mwedzi muTurkey yedu kwakafanana nemadudziro uye chiperengo chemwedzi yeGerman. Mwedzi yeGermanymisoro yakadai semazuva, mwaka uye zvatinozoona mune ramangwana Mamiriro ekunze eGerman Sezvo misoro yakadai seiyi iri pakati pemisoro inotaurwa nguva nenguva muhupenyu hwezuva nezuva. Mwedzi yeGerman Izvo zvinodikanwa kuibata nemusoro zvakakwana.
Isu tinokurudzira zvakasimba kuti iwe utore iyo mini chidzidzo bvunzo pasi penyaya mushure mekunge wanyatsoziva mwedzi yeGerman nemwaka.
Zvino regai tienderere mberi.
Chokutanga pane zvose, ngationei mazita emwedzi yekuGermany iri patafura.
Ipapo ngationei zvose mapepa uye matanho emwedzi umwe weGermany.
Zvino ngationei nguva dzeGermany nemazuva eGermany.
Mwedzi yeGerman (Die Monate)
Mwedzi yeGermany inoratidzwa pasi apa setafura.
Iye zvino regai tione zvose kupereta nekududzira kwemwedzi yeGermany mune urongwa:
Kuverenga kunoratidzwa mumakabereki, i: chiratidzo chinoratidza kuti tsamba yapfuura ichaverengwa kwenguva shoma.
January: Januar (yakoar)
February: February (februar)
March: März (meðts)
June: June (yuni)
Mwedzi yeGermany neRow Numeri
Shamwari dzinodiwa, mumitambo yeGermany uye mabhuku eGermany, zvose nhamba yemitsetse uye mwedzi inopiwa pamwe chete nenhamba yemwedzi kuitira kudzidzisa.
Muchidzidzo chino tichakuratidzawo nhamba yemwedzi muGermany pamwe chete nenhamba yemitsara:
Dhe neonon Monat heißt September
Sezvaunoziva, kune mana mwaka mugore.. Idi rokuti kune mwaka mina pagore ichokwadi chinogamuchirwa pasi rose, kunyange zvazvo kune dzimwe nyika kusina mwaka mina chaiyo mukati megore. Semuenzaniso, mune dzimwe nyika dzepasi, mwaka wechando ungasaonekwa sezvatinogara munyika yedu. Mune dzimwe nyika, mwaka wezhizha hauna ruzivo rwakakwana. Asi chatinofanira kuziva ndechekuti kune mwaka 4 pagore.
ikozvino Mwaka wechiGerman Ngatifambei tiende kumusoro wenyaya.
pazasi Mwaka muchiGerman Takanyora mazita avo neTurkey yavo pamberi pavo. Unofanira kunyatsoiongorora uye kuibata nemusoro.
matsutso : kuwa
chando : chando
chitubu : chitubu
chirimo : chirimo
Ndeipi mwedzi iri muchiGerman mwaka uno?
GERMAN MWEDZI NEGERMAN SEASONS
Zvita Zvita Kurume Mart Juni Haziran Gunyana Eylül
Ndira Ocak Kubvumbi Nisani Juli Temmuz Oktober Gumiguru
Februar Kukadzi Mai Chivabvu Nyamavhuvhu Nyamavhuvhu Mbudzi Mbudzi
Mune tafura iri pamusoro zvese izvi Mwaka wechiGerman pamwe nemwedzi iri mukati memwaka uno inoratidzwa.
Zuva: Muvhuro (frü: ling)
Zuva: Sommer (zo: mır)
Zuva: Zuva (zvinotyisa)
Takaratidza mwedzi weGerman zvinoenderana nemwaka uri patafura iri pamusoro.
Dezember, Januar, Februar mwedzi inowanikwa munguva yechando.
Mumwaka wechirimo, unouya mushure menguva yechando, kune mwedzi yaMärz, Kubvumbi naMai.
Mwedzi Juni, Juli naAugust inowanikwa muzhizha mushure megore.
Mumwaka wematsutso unouya mushure memwaka wezhizha, kune mwedzi waGunyana, Oktober naNovember.
Kutongwa nemwedzi yeGerman
Iye zvino zvatakadzidza musoro wenyaya yemwedzi wechiGerman, tinogona kuita mitsara pamusoro pemwedzi yeGerman.
Usabvunze mubvunzo wemwedzi upi watiri muchiGerman:
Welcher Monat is is heute?
(Ndeupi mwedzi watiri?)
Welcher Monat ist heute? (Ndeupi mwedzi watiri?)
Monat is Okt Gumiguru. (Tiri muna Gumiguru)
Monat is Juni. (Tiri muna Chikumi)
Monat iri muna Kubvumbi. (Tiri muna Kubvumbi)
Monat is Mai. (Tiri muna Chivabvu)
Monat is Januari. (Tiri muna Ndira)
Shamwari dzinodiwa, mushure mekudzidza mwedzi wechiGerman, ikozvino ngatipei muchidimbu ruzivo nezve mazuva eGerman, sezvo achienderana nechinyorwa.
Mazuva nemwedzi muGermany karenda
Pazasi pane muyenzaniso karenda yakagadzirirwa neyedu saiti. Mwedzi nemazuva eGerman zvinowanzooneswa pane makarenda zvinotevera.
Mwedzi yeGerman uye Kisimende yeGerman Mwaka
Mwedzi yeGermany nemwaka Wakaverenga hurukuro yedu, kana uchida Mazuva eGermany Iwe unogona kuverenga hurukuro yedu pane peji rakasiyana.
Mwedzi Mwedzi neZuva dzeGermany Test Test Subject
Isu tinokukurudzira kuti ugadzirise iyo yeGerman mwedzi bvunzo mune yedu yeGerman bvunzo musoro, shamwari dzinodiwa. Mwedzi yeGermany nemwaka weGermany inyaya inowanzodzidziswa mugiredhi 9. Vadzidzi vasina kutora zvidzidzo zveGermany zvakakwana mugiredhi 9 vanogonawo kuona mwedzi yeGermany mugiredhi rechigumi. Kune rimwe divi, vadzidzi vanotanga kudzidza mutauro wekune dzimwe nyika pazera rekutanga vanogona kutora mwedzi yeGerman nemwaka weGerman kosi mugiredhi rechitanhatu-10 kana rechisere.
Iwe unogona kunyora chero mibvunzo uye makomendi nezve edu eGerman zvidzidzo pane almancax maforamu.
Joinha almancax maforamu ane anopfuura anopfuura 35.000 nhengo dzakanyoreswa, uye unakirwe nekudzidza chiGerman online pamwechete.
Almancax ine zvese zvaunoda kuti udzidze chiGerman.
10. kirasi german nyaya inotaura9. kirasi german nyaya inotauramazita emwedzi weGermanmazita emwedzi weGermanmwedzi miviriyeGerman mwedzi hurukuromazita eGermanmazita eGermannguva dzechi Germanmwedzi muGermanmisika muGermanmwedzi GermanyGermany yemwedzimisika jeri
zeynep anodaro 9 apfuura
Zvakanaka kwazvo kuti upe zvinyorwa zvako mubereki, asi zviri nani zvikuru kana vakapihwa mataurirwo evhidhiyo.
kusazivikanwa anodaro 9 apfuura
erdogan anodaro 9 apfuura
celine biez mafani anodaro 9 apfuura
nyaya mr anodaro 8 apfuura
donhedza twig anodaro 8 apfuura
ChiGerman mutauro wakanaka kwazvo
Ramadan anodaro 8 apfuura
nguva yangu anodaro 8 apfuura
NONE-ZITA ADOLESCENT anodaro 7 apfuura
gungwa anodaro 7 apfuura
oramagomaburamago anodaro 7 apfuura
Kune nhare uye desktop asi ini ndinoshandisa n palaptop yangu
yakafaranuka anodaro 7 apfuura
aww ndatenda zvikuru
Emirhan Steel anodaro 7 apfuura
Ini handisi kuwana maficha emwaka muGerman, mungandibatsirewo here? Semuenzaniso, inopisa muzhizha, haina kunaya zvakanyanya, miti inobereka michero, nezvimwe.
wish anodaro 6 apfuura
Mwari vakuropafadzei. Ndatenda zvikuru :-D
Shamil anodaro 6 apfuura
Nhai hama, hapana kutaurirana here, handina kuona zvandinoda :/
BetüL anodaro 6 apfuura
View Semanur's Full Profile anodaro 6 apfuura
sei usina kunyora zvinyorwa
kisi anodaro 6 apfuura
Iko hakuna tsananguro dzakadai se dzinoitika munguva yechando uye zvinoitwa nevanhu
Ndatenda Makanyanya kubatsira
Atakan anodaro 6 apfuura
Mari yakawanda kupfuura iyi
gungwa anodaro 6 apfuura
saiti iyi yakashanda chaizvo kwazvo te teekekkür
guru German site
Tarisa View Full's Profile anodaro 5 apfuura
German ataturkçü mazano
A Young anodaro 5 apfuura
zvakanaka aq anodaro 5 apfuura
VERY VAKAKANGWA YAAAAAAA
GERMAN DZIDZO SITE VERY ZVAKANAKA KANA
mwedzi yeGerman uye mwaka weGerman
Mitauro yeGermany yegiredhi repfumbamwe, hurukuro dzeGerman dzegiredhi regumi
Bok anodaro 5 apfuura
heee chokwadi chakanaka irenice kosi ini ndinofunga
erdal anodaro 3 apfuura
hurukuro yakanaka, kunyanya nhamba yeGerman
Kutenda kune wese munhu akabatsira saiti yakanaka !!!!!
seda anodaro 4 apfuura
Handisati ndamboona nzvimbo inotaurira chiGerman zvakanaka. kunyangwe mudzidzisi wedu haakwanise kuzvitaura chaizvo.
misoro yose yakatsanangurwa zvinoshamisa.Thanks Almanx
zvinokosha anodaro 3 apfuura
Iwe wakatsanangura mwedzi yeGerman uye mwaka weGerman zvakanyatsonaka.